विभिन्न गम्भीर रोग लागेका ८८ जनालाई सरकारले १० करोड खर्च गर्यो
कहिले कति खर्च भयो ? जानकारी सहित
प्रकासित मिति : २०७३ फाल्गुन ११, बुधबार प्रकासित समय : ०७:५७
काठमाडौं,फागुन ११ । सरकारले गम्भीर रोग लागेका निजामती कर्मचारी र तिनका परिवारलाई उपचारस्वरूप पाँच लाख रुपैयाँका दरले सहयोग उपलब्ध गराउँदै आएको छ । कर्मचारीलाई प्रोत्साहनस्वरूप सरकारले उपचार खर्च दिँदै आएको हो ।
आर्थिक वर्ष ०६१–६२ देखि हालसम्म सरकारले निजामती कर्मचारीलाई उपचारका लागि १० करोड ५५ लाख ६ हजार रुपैयाँ वितरण गरेको सामान्य प्रशासन मन्त्रालयले जनाएको छ । विभिन्न रोग लागेका दुई सय ८८ कर्मचारीका लागि सो परिमाणको रकम वितरण गरिएको हो ।
निजामती सेवा नियमावली २०५० को नियम ५५ अनुसार कडा रोग ९मुटु, मिर्गौला र क्यान्सर० लागेका निजामती कर्मचारीका श्रीमान् तथा श्रीमतीलाई यो सुविधा दिँदै आइएको छ । कर्मचारीका छोराछोरी तथा आमाबुबाका लागि भने यो सुविधा उपलब्ध छैन । मन्त्रालयका अनुसार गत आव ०७२–७३ मा २७ जना बिरामी कर्मचारीका लागि एक करोड २६ लाख आठ हजार रुपैयाँ वितरण गरिएको थियो । चालू आव ०७३–७४ को सात महिनाको अवधिमा १४ कर्मचारीका लागि ६४ लाख ३७ हजार पाँच सय २१ रुपैयाँ वितरण गरिएको मन्त्रालयले जनाएको छ ।
कहिले कति रकम वितरण भयो ?
मन्त्रालयका अनुसार आव २०७१–७२ मा २४ जनाका लागि एक करोड एक लाख ५१ हजार, २०७०(७१ मा ३० जनाका लागि एक करोड २० लाख ७७ हजार, २०६९–७० मा २६ जनाका लागि एक करोड २४ लाख, २०६८(६९ मा ३५ जनाका लागि एक करोड ५१ लाख ७३ हजार, २०६७–६८ मा ३६ जनाका लागि एक करोड ६३ लाख ६७ हजार रुपैयाँ वितरण गरिएको छ ।
यसैगरी, आव २०६६–६७ मा ३० जनाका लागि एक करोड २४ लाख ३५ हजार, २०६५(६६ मा २२ जनाका लागि ९४ लाख ८३ हजार, २०६४–६५ मा १३ जनाका लागि १६ लाख ९३ हजार, २०६३–६४ मा १५ जनाका लागि १५ लाख, २०६२–६३ मा ६ जनाका लागि ६ लाख र २०६१(६२ मा १० जनाका लागि साढे नौ लाख वितरण गरिएका मन्त्रालयले जनाएको छ ।
सहयोग पाउने प्रक्रिया यस्तो छ
नियमावलीमा थप उपचार खर्चको व्यवस्था
निजामती सेवा नियमावलीको नियम ९४।१ ले कर्मचारीका लागि थप उपचार रकमसमेतको व्यवस्था गरेको छ । सोअनुसार निजामती कर्मचारीले सेवा अवधिभर राजपत्रांकित श्रेणीको कर्मचारी भए बाह्र महिना बराबरको, राजपत्र अनंकित प्रथम श्रेणी तथा सोसरहको श्रेणीविहीन कर्मचारी भए १८ महिना बराबरको तथा अन्य राजपत्र अनंकित र श्रेणीविहीन कर्मचारी भए २१ महिना बराबरको खाइपाइ आएको तलबबराबरको रकम उपचार खर्चबापत पाउने व्यवस्था गरिएको छ ।
यो समाचार आजको नयाँ पत्रिकामा प्रकाशित छ–